Minimal White, Flowing Lakefront Cafe | Heisuke Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / White Minimal, kafe eo amoron'ny farihy | Heisuke Design
White Minimal, kafe eo amoron'ny farihy | Heisuke Design
2021 / 05 / 31 FisokajianaInterior design 6071 0
Suzhou Bay Park Sports
Ao anatin'ny tontolon'ny fampidirana ny Delta ao amin'ny Yangtze, ny fiainana any amin'ireo tanàn-dehibe Suzhou dia nizara ho faritra samihafa miaraka amin'ny lamina indostrialy. Amin'ny maha faritra fampandrosoana vaovao indrindra an'i Taihu New City, ny fironana dia ny fanatsarana ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ny fotodrafitrasa ao amin'io faritra io. Ny Suzhou Bay Sports Park dia miorina eo afovoan'ny Taihu Lake New Town - ny East Taihu Lake Ecological Tourism Resort. Ilay valan-javaboary dia misy ranomasina voninkazo, lalana mandeha, dobo, kianja ary hazo maitso. Toerana tsara ho an'ny fizahan-tany sy fialan-tsasatra, fialamboly ivelany, fanatanjahantena ary fanatanjahan-tena. Ny Sports Park dia eo amin'ny lafiny stratejika miaraka amin'ny Farihin'i Taihu andrefana. Izy io dia mifandray amin'ny afovoan-tanànan'i Suzhou sy Shanghai amin'ny lafiny avaratra avo ary Zhejiang amin'ny lafiny atsimo. Tsy vitan'ny hoe manome toerana ahazoana alalana hifandraisana ireo mponina manodidina, fa mahasarika mpitsidika maro avy amin'ny tanàna mifanila aminy koa. Ny tetik'asa dia miorina amin'ny zaridaina fanatanjahan-tena, akaikin'ny kianja filalaovana tennis sy baskety, voahodidin'ny maitso, ary manohana ny valan-javaboary.
▼ Hijery ny trano sy ny valan-javaboary
© Xu Yingda
▼ Lim kafe avy any ivelan'ny bozaka
Eritrereto izany amin'ny fomba fijerin'ny tanàna vaovao. Ny fialam-boly tena ilaina ao amin'ny valan-javaboary dia misokatra amin'ny fahafaha-manao sy sary an-tsaina bebe kokoa. Ny ankamaroan'ireo trano manohana ao amin'ny valan-javaboary izay misy ifandraisany akaiky amin'ny besinimaro dia mbola eo am-panatanterahana ireo filàna fototra ilaina amin'ny asa. Ary ny fahafahany bebe kokoa amin'ny ho avy dia nohatsaraina ihany koa amin'ity sehatra ity. Ny fanatsarana toy izany dia maneho ny feony, ny fiahiany ary ny fihetsika ary ny toeran'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy ireo.
▼ Famolavolana fitaratra lehibe hatramin'ny gorodona misy taratra fitaratra taratry ny tontolo manodidina
Amin'ny maha mpamolavola anay dia te-hamorona tranobe mamorona eo amoron'ny Farihin'i Taihu izahay izay mety ho lasa mariky ny faritra amin'ny valan-javaboary. Namboarinay sy namboarinay tamin'ny fomba mora izy io hanatsarana ny traikefa amin'ny habakabaka an-tanàn-dehibe. Mahatonga ny olona hahatsiaro ho milamina sy voajanahary ao amin'ny valan-javaboary, ary mamela ny trano hifangaro amin'ny tontolo iainana araka izay azo atao.
▼ fitaratra amoron-dranomasina hita taratra ny filentehan'ny masoandro
▼ Ahitana taratry ny fahitana amin'ny alina ny farihy satria manakaiky ny alina
Tany am-boalohany ilay tetikasa dia rafitra rindrina fanetezana hazo manohana trano ao amin'ilay valan-javaboary. Amin'ny maha ivon'ny Taihu Lake New Town azy, ny valan-javaboary dia manantena ny hanome ny mponina manodidina sy ny mpitsidika vahiny toerana fialam-boly amin'ny alàlan'ny fanavaozana ilay trano voalohany. Na aorian'ny fampihetseham-batana hatsembohana na fitsangatsanganana antoandro eny amoron-drano dia ho toerana fialan-tsasatra, hisakafoana ary hivoriana. Ny famolavolana ny endrika dia mifototra amin'ny firafitry ny trano hazo tany am-boalohany, ary ny sakana mielanelana mamorona habaka anatiny feno. Ny takelaka misy perforated fotsy sy ny fitaratra lehibe avy amin'ny gorodona dia ampiasaina amin'ny famolavolana ihany koa, mamorona endrika roa samy hafa, ny iray manatrika anatiny ary ny iray manatrika ivelany. Ny lafiny iray dia miatrika ny farihin'i Taihu, ary ny vokan'ny taratra dia mahatonga ity trano maoderina ity hiditra ao amin'ny manodidina azy manontolo. Io dia mamela ny trano handrafitra ny sarin'ny olona sy ny tanàna. Ny lafiny iray dia miatrika ny fitsarana hamorona tokontany, ary eo am-pananganana fifandraisana akaiky amin'ny valan-javaboary sy ilay toerana.
▼ Lim Café fisade ambanin'ny lanitra madio
▼ Lim Café miatrika fahitana amin'ny alina
▼ Ny tranobe eo amoron-dalana - Lim Coffee
▼ Toerana ivelan'ny trano fisakafoanana Lim Café
Ny lalantsara mankamin'ny tokotany miaraka amin'ny tany boribory sy sary sokitra metaly boribory metaly no vavahady tsotra indrindra. Ny endriny tsotra sy malala-tanana dia mifanaraka amin'ny lohahevitra lehibe amin'ny marika LIM Coffee. Rehefa mankafy ny sakafo matsiro, dia azon'ny mpitsidika atao ny maka sary vondrona. Ireo takelaka vita amin'ny alim-boaloboka fotsy lehibe dia manome fahatsapana mamiratra sy mahafa-po, mitarika ireo mpitsidika hiditra amin'ny trano heva.
▼ Ny fidirana amin'ny tokotany dia natao miaraka amina gorodona mitarika
▼ Ny toerana fialam-boly ao an-tokotany nanako ny tany boribory
▼ Fijery amin'ny alina eo an-tokotany anjakan'ny faribolana
Rehefa miposaka ny masoandro, na rehefa milentika ny masoandro, ny fitaratra fitaratra tokana azo zahana dia mahatonga ny vatan'ny trano ho toy ny voahangy amin'ny ahitra eo amoron'ny farihy, taratry ny lanitra, rahona, voninkazo ary mpandeha an-tongotra izay manana hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa. Ireo olona miala sasatra ao anatin'ny trano sy ireo mpandeha an-tongotra mikoriana any ivelany dia mifampisaintsaina amin'ny sary hosodoko. Amin'ny alina, rehefa mirehitra ny trano dia bara amoron-dranomasina tsy manam-paharoa izy io.
▼ Fijery ivelany ny lobby
Ny rihana voalohany amin'ny tranobe dia misy toerana malalaka malalaka sy mahaliana, efi-trano tsy miankina amin'ny habe samihafa, ary koa sehatry ny lozisialy an-dakozia sy fandroana. Ny rihana faharoa dia toy ny lamina miovaova mba hitazonana hetsika tsy miankina amin'ny antoko tsy miankina. Ao amin'ny lobby, ny valindrihana fotsy miendrika onja, natao miaraka amina vatan-kazo tany am-boalohany, dia mihantona ambony ambany avy eny amin'ny valindrihana. Manohitra ny lanitra sy ny rahona ivelan'ny varavarankely, dia noforonina sary hosodoko ao anaty sary hosodoko. Ny hazavana dia midina avy amin'ilay sombin-javatra mihantona miaraka amin'ny hatsaran-tarehy tsotra. Mahatonga rivo-kanto kanto izany. Ny fanaka sy karipetra mampiadana dia manatsara ny habaka. Hita ho toy ny tsy misy izy nefa tsy very ny fahatsapany fahaizany. Zavamaniry maintso roa na telo apetraka amin'ny fomba mahavariana no mandravaka ity toerana fotsy madio ity.
▼ Ny toerana malalaka ao amin'ny lobby ao amin'ny rihana voalohany amin'ny Lim Coffee
© Yang Nan
▼ Ankafizo ny fomba fijery ivelany amin'ny fotoana iray
▼ Ny koveta fanasana fusion
© lim cafe
▼ antsipirian'ny valindrihana onja
“Ny maritrano dia mozika mangatsiaka, ary ny mozika kosa mandroso ny maritrano.” Mandeha mankamin'ny faritry ny mozika milentika, ny piano mpanao sary sokitra fotsy dia mijoro tsara amin'ny tohatra mihodina. Ny vaninteny mirotsaka tsimoramora avy amin'ny lakilen'ny piano dia mameno ny toerana amin'ny loko madio. Manintona anao hijanona eto izany. Ho fanampin'izany, ny efitrano tsy miankina mizatra tsara dia manome ho an'ny vahiny faritra tsy dia tsara kalitao. Ny jiro tsipika tsotra amin'ny rihana faharoa dia mamaritra ny endrika tafo mitongilana izay voatahiry tanteraka. Ny vera lehibe dia mampiseho ny toerana mahafinaritra eo ivelan'ny varavarankely ary manatsara ny kalitaon'ny habaka.
▼ Ny faritry ny bara lobby dia eo anilan'ny tohatra mihodina
▼ Faritra mozika milentika mandentika mahatsapa ny naoty mozika
▼ Toerana rihana faharoa an'ny Lim cafe
Ny faritra ivelan'ny tokontany ivelany dia miempo ao amin'ny sehatra maitso voajanahary, toy ny kapoka majika latsaka amin'ny horonam-bokin'ny zaridaina voajanahary, mifangaro ary mifandray amin'ny teboka. Ny pendulo ivelany sy ny bara mihodinkodina dia manako ny toerana, mampiseho sary ny zavakanto voajanahary izay mitaona ny olona hijanona. Amin'ny hariva, ny jiro toa ny voahangy dia manaingo ny alina maizina ary manazava ny tokontany. Ankafiziko amin'ny alina, mivory eto ny olona ary miresaka malalaka.
▼ Lim Café raha ny fahitana ny ranomasina voninkazo avy lavitra no jerena
Amin'izao vanim-potoanan'ny fampandrosoana haingana izao, ny famolavolana ny mari-trano dia mahatonga antsika ho maika hiditra amin'ny trano avo lenta mba hialana amin'ny korontana any ivelany. Raha vantany vao mikatona ny varavarana dia miditra amin'ny tontolontsika kely isika. Amin'ny maha-mpanelanelana azy, mety mahasarika olona avy amin'ny toerany manokana ve ilay valan-javaboary hihaona, hifampiresaka ary hifandray amin'ny tanàna? Na dia tsy mahatratra ny fampisehoana tsara indrindra ny fonosana zaridaina miorina amin'ny famolavolana ny rafitra tany am-boalohany aza, tsy manenina izahay. Manantena i LIM Café fa hamorona toeram-pivorian'ny zaridaina ho an'ny besinimaro miaraka amina endrika ivelany sy kanto sy ivelany ary endrika ivelany mahaliana ao anatiny. Manatsara ny fifandraisan'ny olona izany. Mifampihaino ary mamoroa fahafaha-manao bebe kokoa. Niafina tao an-joron'ilay zaridaina ara-panatanjahantena eo amoron'ny rano mangarahara amin'ny Farihy Taihu sy ireo hazo sy zavamaniry maitso mavana izy ireo. Mifanerasera amina namana vitsivitsy ary mitsangantsangana eto. Azonao atao ny mijery voninkazo, mandehandeha, mijery ny farihy ary manao fanatanjahan-tena eto, izay tena fifaliana eto an-tany.
▼ Ny ririnina ivelan'ny Lim Coffee
▼ Drafitra voalohany
▼Drafitra faharoa an'ny rihana faharoa
▼ Fomba fijery fizarana
▼ Fomba fijerin'ny Axis
▼ Sary maodely
▼ Sary modely
Anaran'ny tetikasa: Tranobe fialam-boly fialam-boly Suzhou Bay Sports Park, Lim Coffee
Namboarin'i: Heisuke Design
Tetikasa famolavolana sy famitana taona: 2020; 2021
Ekipa mpamorona: Wang Yitong, Yang Nan, Lin Guijiadong, Xiao Xiangdong, Wang Enzhi
Famolavolana firafitra / fantson-drano: Shanghai Hentai Architectural Design & Consulting Co.
Famolavolana fanaka malefaka: Suzhou Fanwei Private Design & Consulting Co.
Adiresin'ny tetikasa: Suzhou Bay Sports Park, Distrikan'i Wujiang, Suzhou
Faritra fanorenana: 600m2
Zon'ny sary: ​​Yingda Xu, Lim cafe, Nan Yang
Mpanjifa: Lim cafe, Suzhou Wujiang City Investment Group
Previous :: Fomban'ny MUJI, lamina mirindra sy mihaja | Jushe United Next: Rafitra tsotra amin'ny habakabaka, fampidirana zavakanto ambonin'ny fiainana | GS Design
2021 / 08 / 15 4074
2021 / 08 / 15 3582
2021 / 08 / 14 3321
2021 / 08 / 14 3737
2021 / 08 / 14 3138